Ejipta: SCAF – Ny Andry Faran’ny Trano? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2017 7:32 GMT
(Fanamarihana:Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2011)
Ampahan'ny fandrakofanay manokana ny Revolisiôna 2011 tao Ejipta ito lahatsoratra ito.
Tato anatin'ireo andro faramparany tany Ejipta, nanatri-maso izao izahay: ny fihazonana ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy malaza, Alaa Abd El Fattah; sivily iray hafa indray niharan'ireo Fitsarana Miaramila, inoana ho nampijaliana ho faty tao amin'ny fonjany; vao haingana ireo mpamono an'i Khaled Said (ilay tranga izay nandrehitra ny revolisiôna Ejiptiana) no nosaziana fito taona an-tranomaizina monja; ary hatramin'izao, tsy mbola nanaiky nibaby ny andraikitra tamin'ny vono olona faobe tao amin'ny faritra Maspero, tamin'ny fiandohan'ity volana ity ny Filankevitra Faratampon'ny Hery Mitam-piadiana.
Nampanontany tena ireo Ejiptiana mpitoraka bilaogy ireo zavatra mitranga rehetra ireo hoe miverina any amin'ny toerana voalohany ve isika? Sa tahaka ny nosoratan'i Alaa tao amin'ny hafatra nalefany avy any am-pitazonana azy, izay nadikan'i Sultan AlQassemi hoe:
Tsy nandrandraiko hiverina indray ny tranga toy ny lasa, dimy taona aty aoriana, taorian'ny revolisiona izay nandavoantsika ny mpampihorohoro, hiverina any am-ponja aho?
Vehivavy manao akanjo mainty mitazona labozia misaona ny herisetra tao Maspero. Sary avy tany amin'i Amr Jamil, fizakàmanana Demotix (13/10/11).
Mazava amin'ny maro, isan'izany i Amira Nowaira, fa tsy mahomby araka ny tokony ho izy ilay Filankevitra Faratampon'ny Hery Mitam-piadiana (SCAF) amin'ny fitantanana ny fotoana tetezamita ao Ejipta:
Maherin'ny 3 herinandro taorian'ilay fifandonana nahafaty izay nahafatesana olona 27 (hatramin'ny fotoana nanoratana) ary naratra an-jatony, ny Alahady 9 Oktobra 2011, teo anoloan'ny tranoben'ny Fahitalavi-panjakana Ejiptiana, ao Maspero, mbola maro ireo fanontaniana tsy nahitàna valiny. Ny hany zavatra mazava izao dia nanamarika teboka fihodinana mampidi-doza amin'ny (tsy) fahaiza-mitantan'ny filankevitra miaramila ny tetezamitan'i Ejipta eo amin'ny fitondrana, ary fandefasana hafatra mampitahotra maro, ilay fanafihana mahery vaika natao tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana, izay Kôpta ny ankamaroany .
Tsy vitan'ny hoe lazaina ho tsy mahay mitantana ny fotoanan'ny tetezamita fotsiny izy ireo, fa voampanga ho mitsangana ao ambadik'iny vono olona faobe iny ihany koa, araka ny voalazan'ny maro eto. Ary araka ny mpanoratra ny Bikya Masr, Hayden Pirkle, ilay Kôpta mpandraharaha, Naguib Sawiris, ihany koa dia nitàna ireo miaramila Ejiptiana ho tomponandraikitra tamin'ny vono olona faobe tao Maspero:
Niampanga ny miaramila Ejiptiana ho mpiray tsikombakomba tamin'ny vono olona faobe tao Maspero ny 9 Oktobra ilay Kôpta mpandraharaha malaza lasa mpanao politika, Naguib Sawiris. Nolavin'i Sawiris ny hoe ireo “mpiditra antsokosoko” no niketrika ny zava-nitranga tany Maspero, ary nolazainy fa andraikitry ny miaramila ny mitazona ny fandriampahalemana, tao amin'ny tafatafa tamin'ny “Point of Order” -n'ny Fahitalavitra Al Arabiya.
Fa ahoana ny nahatongavantsika tamin'ny teboka hoe tsy momba ny atsy sy ny eroa ny maro amin'ny olona amin'ireo trangan-javatra toy izao, ary miandany amin'ny miaramila mihitsy aza ny ankamaroany?
Volana vitsivitsy lasa izay, nisy fifandonana nitranga tao amin'ny distrikan'i Al-Abbasseya, ary avy eo ireo mpikatroka mafana fo nanoratra ny fomba niketrehan'ny SCAF ny mba hanoherana ny diaben-dry zareo nandritra ny andro maro tao amin'ireo fantsonà haino aman-jery tantanan'ny fanjakana, ary namoaka fanambaràna ny alina nialoha ireo fifandonana mbola tamin'ny tondrom-peo toy izany ihany koa. Vao haingana, tetikady mitovy amin'izany no nampiasaina tamin'ny vono olona faobe tao Maspero, ary araka an'i Amira Nowaira, nivantambantam-piteny kokoa ny fahitalavi-panjakana tamin'ny fihantsiana natao tamin'ireo Kôpta :
Voalohany izao ny Fahitalavi-panjakana no niditra amin'ny fihantsiana mivantana sy tsy misy henatra atao amin'ny Kôpta. Nanao ny tsy azo noeritreretina mihitsy izy io raha nilaza fa notafihan'ny Kôpta hono ny miaramila, ary niantso ireo “olom-pirenena hajaina” mba hivoaka hiaro ny miaramila, tsy tonga saina akory angamba hoe ny miaramila no tokony hiaro ireo olom-pirenena fa tsy ny mifamadika amin'izany. Mitovy lanja amin'ny fanasàna ireo mahery fihetsika, fanatika sy mpanavakavaka mba hanafika ireo Kôpta eny an-dalambe izany.
Namintina ny vokatry ny media-panjakana i Elazul ao amin'ity andalana manaraka ity:
Ny porofo ihany no mampiseho fa tsy hoe manohitra fotsiny ny vondrona Mubarak (tafiditra amin'izany ny SCAF) isika, fa ny ampahany (lehibe) amin'ireo vahoaka izay mandraka androany, manozona ny andro nanaovantsika fitroarana, ary mijery antsika ho toy ny mpamono olona sy mpamadika.
Mandritra izany, nanampy ny The Big Pharaoh hoe manandrana mampita hafatra ny SCAF, tsy hoe ho an'ireo Ejiptiana ihany, fa ho an'ny fitantànana Amerikana ihany koa:
Te-hahafantatra aho raha azon'ny fitantànan'i Obama ny hafatra tian'ny SCAF nampitaina hatry ny namelan'izy ireo ny masoivoho Israeliana ho voatafika. Ary afaka fintinina tahàka izao manaraka izao io hafatra io: na izahay, na ny fahapotehana ao Ejipta, na izahay, na ny adin'ny sekta.
Raha jerena ilay fanambaràna kely nataon'ny Amerikana taorian'ilay vono olona faobe, mino aho fa tafita ny hafatry ny SCAF. Ary tsy hoe tafita tany amin'ny vondrona iraisam-pirenena fotsiny iny, fa tany amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy. Mibahan-toerana eto amin'ny firenena ankehitriny ny tsy fandriampahalemana, ary vitsy ihany ireo te-hifanandrina amin'ny fitondrà-miaramila, izay eritreretin'izy ireo ho hany andry farany mampitambatra ny firenena.
Nampiany avy eo fa toy ny jiro maitso ho azy ireo ny famoahana io karazana hafatra io, milaza fa manomboka ny famoretana ireo mpikatroka mafana fo sy mpanao gazety :
Mitondra antsika any amin'ny eritreretiko hanjo ireo mpikatroka mafana fo ao Ejipta io. Aorian'ny nametrahany matotra fa tsy hisy fanoherana goavana, na avy ao anatiny na avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena, mino aho fa hanao hery famoretana amin'ireo mpikatroka mafana fo sy ny media tsy mbola nisy toa azy ny SCAF.
Ary izay indrindra ny zavatra lazain'ny maro hoe mitranga ankehitriny. Kanefa na eo aza izany rehetra izany, Abu Tawil nandrabiraby ny fomba fankalazan'ny SCAF ny fanandratana ny saina avo indrindra manerantany any Ejipta:
Mazava ho azy, manoloana ireo fotoana mikorontana saingy mampisomebiseby, ary efa ho valo volana mendrika ny tsy (fahaiza-)mitantan-dry zareo, mila maka aina kely ny SCAF, tsy hitondra ireo mpikatroka mafana fo ho eo anatrehan'ny fitsaràna miaramila, miampanga ireo tànana avy any ivelany amin'ireo olàna anatin'i Ejipta rehetra, ary milaza ireo hetsi-panoherana rehetra sy ireo fitokonana ho mandrahona ny firaisam-pirenena. Fanampin'izany, noho ny fandosiran'ny fampiasambola avy any ivelany, fidinan'ny tahiry vola vahiny, ary ny fidinana valopolo isan-jaton'ny isan'ireo mpizahatany, afaka mandanindany vola aminà tetikasam-bahoaka tsy tena ilaina akory ny toekarena Ejiptiana. Araka izany, mirehareha ny SCAF manambara ny fanandratana ny saina avo indrindra manerantany. Mirefy 12 amin'ny 15 metatra ary misidina eny amin'ny haavo 176 metatra (14 metatra avo kokoa noho ny an'i Azerbaijan), nihofahofa teny akaikin'ilay tanim-bovoka filalaovako frisbee indroa isan-kerinandro ilay saina, sady notanisaina ny tononkalo fitiavan-tanindrazana ary nohiraina ny hiram-pirenena.
Mandritra izany, mivonona ho amin'ireo fifidianana parlemantera izay tokony hatao ny faran'iny volana iny ireo antoko Ejiptiana. Ny maha zava-dehibe io parliemanta ho avy io dia izy hanondro ny kaomity izay hanoratra ny lalàmpanorenana Ejiptiana, kanefa, nanasa ireo antoko ara-politika i Ali Al-Selmy, Praiminisitra Lefitra misahana ny Raharaha Politika, mba hangataka ny fankatoavan'izy ireo an'ireo foto-kevitra ijoroan'ny lalàmpanorenana izay hita ho manome fahefana goavana ny miaramila.
Tao amin'ny Twitter, nahatonga adihevitra betsaka ireo fiovàna:
@abuhatem: Manome fahefana goavana ny miaramila ny volavola natolotry ny governemanta any Ejipta ahitàna ireo foto-kevitra ambonin'ny lalàmpanorenana ambony .
@zalali: Manome fahefana tsy fahita ho an'ny #SCAF mba hitsabaka amin'ny famolavolàna ny #lalàmpanorenana vaovao ilay tolodalàna vaovao. Niala tamin'ny fivoriana ireo mpanatrika sasany. #Egypt
Na izany aza, matahotra i Khaled hoe mety tsy tena mitsikera loatra an'ilay tolodalàna toy ireo mpikatroka mafana fo ao amin'ny Twitter ireo olona eny an-dàlambe.
@Khaled_A_: Tena mino aho fa ity no lasa resaky ny olona eny an-dàlana mikasika ilay tolodalàna ambonin'ny lalàmpanorenana: Inona no tsy mahamety ny fipetrahan'ny miaramila ho ambonin'ny lalàmpanorenana? Miaramilantsika ihany io, ary niaro ny revolisiôna izy ireo ary tsy mbola nitifitra na iza na iza.
Ary ny farany, manontany tena i Mohamed Kamel, raha mbola mety hisy hevitra ny hitroaran'ny olona indray.
@MohHKamel: Ho sarotra ve ny hahazo olona hitroatra indray taorian'ireo sivy volana lasa? Tsy misy fandriampahalemana, fifanenjanan'ny sekta, toekarena mihozongozona?